Vatongi 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
19 Zvino mumazuva iwayo pakati paIsraeri pakanga pasina mambo.+ Mumwe muRevhi akanga achigara kwenguva yakati mumativi ari kure kwazvo enzvimbo ine makomo yaEfremu.+ Kwapera nguva yakati, akatora murongo+ aibva kuBhetrehema+ riri muJudha kuti ave mudzimai wake. 2 Murongo wake akatanga kumuitira ufeve.+ Akazomutiza, akaenda kumba kwababa vake kuBhetrehema riri muJudha, akagara ikoko kwemwedzi mina izere. 3 Murume wake akabva asimuka, akamutevera kuti anotaura naye achimunyaradza kuti amudzose; uye aiva nomushandi wake+ nembongoro hono mbiri. Nokudaro akamupinza mumba mababa vake. Baba vomukadzi wacho wechiduku pavakamuona, vakabva vafara kusangana naye. 4 Naizvozvo tezvara vake, baba vomukadzi wacho, vakamudzivisa, zvokuti akaramba achigara navo kwemazuva matatu; vaidya nokunwa, uye airarapo.+ 5 Pazuva rechina, pavakafumomuka senguva dzose, zvino iye akasimuka kuti aende, asi baba vomukadzi wacho wechiduku vakati kumukuwasha wavo: “Tsigisa mwoyo wako nechimedu chechingwa,+ pashure mozoenda henyu.” 6 Naizvozvo vakagara pasi, uye vari vaviri vakatanga kudya nokunwa pamwe chete; baba vomukadzi wacho wechiduku vachibva vazoti kumurume wacho: “Ndapota, uya urare,+ uye mwoyo wako ngaufare.”+ 7 Murume wacho paakasimuka kuti aende, tezvara vake vakaramba vachimukumbira, zvokuti akararazve ipapo.+ 8 Paakafumomuka zuva rechishanu kuti aende, baba vomukadzi wacho wechiduku vakati: “Ndapota, tsigisa mwoyo wako.”+ Vakaverengera kusvikira pakupera kwezuva. Vari vaviri vakaramba vachidya. 9 Zvino murume wacho+ akasimuka kuti aende, iye nomurongo wake+ nomushandi wake;+ asi tezvara vake, baba vomukadzi wacho wechiduku, vakati kwaari: “Zvino tarira! Kwava kuda kuvira. Ndapota rarai.+ Tarira zuva rava kuda kunyura. Rara pano, uye mwoyo wako ngaufare.+ Uye mangwana mukirai parwendo rwenyu, uende kutende rako.” 10 Zvisinei, murume wacho haana kubvuma kurara, asi akasimuka, akaenda, akasvika pakatarisana neJebhusi,+ kureva Jerusarema;+ uye aiva nembongoro hono mbiri dzaiva dzakasungirirwa zvigaro, nomurongo wake nomushandi wake. 11 Pavakanga vava pedyo neJebhusi, sezvakwakanga kwava kusviba,+ mushandi wacho akabva ati kuna tenzi wake: “Haiwa, uyai zvino, titsaukire muguta iri revaJebhusi+ tirare imomo.” 12 Asi tenzi wake akati kwaari: “Ngatiregei kutsaukira muguta revanhu vasiri vokwedu+ vasiri vamwe vevanakomana vaIsraeri; asi ngatipfuurirei tisvike kuGibhiya.”+ 13 Akati kumushandi wake: “Uya, ngatiswedere pedyo neimwe yenzvimbo dzacho, tirare muGibhiya kana kuti muRama.”+ 14 Nokudaro vakapfuura, vakaramba vachienda, zuva rikatanga kuvavirira vava pedyo neGibhiya, raBhenjamini. 15 Naizvozvo vakatsaukira imomo kuti vapinde, varare muGibhiya. Vakapinda, vakagara pasi munzvimbo yomuguta yaiungana vanhu, asi hapana munhu akavapinza mumba kuti varare.+ 16 Vakazoona mumwe mukweguru aiuya achibva kubasa rake kumunda manheru,+ murume wacho aibva kunzvimbo ine makomo yaEfremu,+ akanga achigara kwenguva yakati muGibhiya; asi varume venzvimbo yacho vaiva vaBhenjamini.+ 17 Paakatarira, akaona murume wacho, mufambi, ari munzvimbo yomuguta yaiungana vanhu. Naizvozvo mukweguru wacho akati: “Uri kuendepi, uye unobvepi?”+ 18 Iye akati kwaari: “Tiri kupfuura tichibva kuBhetrehema riri muJudha tichienda kumativi ari kure kwazvo enzvimbo ine makomo yaEfremu.+ Ndiko kwandinobva, asi ndakaenda kuBhetrehema riri muJudha;+ uye ndiri kuenda kumba kwangu, asi hapana munhu ari kundipinza mumba.+ 19 Tine uswa nezvokudya+ zvembongoro dzedu hono, tine chingwa+ newaini zvangu nezvomurandasikana wenyu+ uye zvomushandi+ ane mushumiri wenyu. Hapana kana chimwe chete chisipo.” 20 Zvisinei, mukweguru wacho akati: “Iva norugare!+ Zvose zvausina ngazvive pandiri.+ Asi usarara munzvimbo inoungana vanhu.” 21 Akamupinza mumba make,+ akakandira mbongoro hono zvokudya zvakagayiwa.+ Vakabva vageza tsoka dzavo,+ vakatanga kudya nokunwa. 22 Pavakanga vachifadza mwoyo yavo,+ tarira! varume veguta, vaingova varume pasina,+ vakakomba imba yacho,+ vachisundidzirana pasuo; vakaramba vachiti kumukweguru, muridzi weimba: “Budisa murume apinda mumba mako, kuti tirare naye.”+ 23 Muridzi weimba yacho akabuda achienda panze kwavaiva, akati kwavari:+ “Aiwa, hama dzangu,+ ndapota, musaita chero chinhu chipi zvacho chakaipa, murume uyu zvaapinda mumba mangu. Musaita chinhu ichi choupenzi chinonyadzisa.+ 24 Hoyu mwanasikana wangu mhandara nomurongo wake. Ndapota, regai ndivabudise muvabate chibharo+ muvaitire zvakakunakirai. Asi musaitira murume uyu chinhu ichi chinonyadzisa, choupenzi.” 25 Asi varume vacho havana kuda kumuteerera. Nokudaro murume wacho akabata murongo wake,+ akamubudisa panze kwavari; vakatanga kurara naye,+ vakaramba vachimuitira zvisina kufanira+ usiku hwose kusvikira mangwanani, vachibva vazomurega achienda utonga hwotsvuka. 26 Mukadzi wacho akabva asvika pakwakanga kwava kuda kuedza, akawira pasi pasuo reimba yomurume uya maiva natenzi wake,+—kusvikira kwaedza. 27 Gare gare tenzi wake akamuka mangwanani, akavhura masuo eimba yacho, akabuda kuti aende, akaona mukadzi wacho, murongo wake,+ akawira pasuo reimba, maoko ake ari pachikumbaridzo! 28 Naizvozvo akati kwaari: “Simuka, handei.” Asi pakanga pasina aipindura.+ Murume wacho akamukwidza pambongoro, akasimuka, akaenda kunzvimbo yake.+ 29 Akabva apinda mumba make, akatora banga rokuurayisa, akabata murongo wake, akamucheka-cheka maererano nemapfupa ake kuva zvidimbu gumi nezviviri,+ akamutumira munharaunda yose yaIsraeri.+ 30 Zvino vanhu vose vaizviona vaiti: “Chinhu chakadai seichi hachisati chamboitwa kana kuti kuonekwa kubvira pazuva rakabuda vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti kusvikira nhasi. Isai mwoyo yenyu pazviri, ranganai+ mutaure.”